Maxay Midowga Murashaxiinta ka yiraahdeen tallaabooyinka uu qaaday Farmaajo?
Farmaajo ayaa si ku-meel gaar ah agaasimaha hay'adda Sirdoonka iyo Nabad-Sugidda Qaranka ugu magacaabay Gaashaanle Sare Yaasiin Fareey, halka agaasimihii hore Fahad Yaasiin uu u magacaabay la-taliyihiisa Amniga Qaranka.
War-saxaafadeed kasoo baxay Midowga Murashaxiinta ayaa lagu yiri “Golaha Midowga Murashixiinta madaxtinimada Soomaaliya waxa ay aad iyo aad u canbaareynayaan falalka uu ku kacay Madaxweynaha mudda xileedkiisu dhamaaday, ee uu ku soo saaray go'aannada baal maarsan dastuurka iyo sharciga dalka u degsan.”
“Goluhu waxuu arkaa go'aannadaas in ay yihiin kuwa lagu carqaladeynaayo dadaalada Ra'iisalwasaare Maxamed Xusen Rooble, ee ku aaddan in baaritaan daah furan iyo Caddaalad la marsiiyo kiiska Ikraan Tahliil, sidoo kalena lagu xagal daacinayo doorashooyin daahfuran waqtigoodana ku dhaca.”
Goluhu ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka in ay ogaadaan in go'aannadaas “ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagu khalkhal galiyo xasiloonida iyo ammaanka aan caga badan ku taagneyn ee dalka.”
Waxay ugu baaqeen saraakiisha ciidanka “in aysan u hoggaansamin go'aannada Madaxweynaha mudda xileedkiisu dhamaaday ee sharciga baalmarsan.”